Xa umgcini wakho wesithathu nje akangaphumi ukuhambelana nokufunda ukuqonda ( uyazi ukuba unenkinga ngenxa yokungabi nentshisekelo kwiincwadi, amanqaku omvavanyo ompofu, kunye negalelo lootitshala) Yintoni omele uyenze ngayo? Unokumnceda njani ukuba abe ngumfundi ophumelelayo? Iindaba ezilungileyo kukuba uhamba ngendlela efanelekileyo! Ezi ncwadi zokufunda zokufunda ezilandelayo ziyakunceda uncede umntwana ngezakhono kunye nezicwangciso eziyimfuneko zokuqonda oko bakufundileyo.
Ukuphumelela kweSifundo seSifundo seBanga lesiThathu
Umbhali: Sylvan Learning, Inc.
Isishwankathelo: Lo mbala opheleleyo, ibhokisi lemihla ngemihla lidibanisa isipelomagama, isilulumagama kunye nokufunda ukuqonda izicwangciso zezingane ezifuna ukuphuculwa kwezoLwimi ezipheleleyo. Thenga iipokethi ezipheleleyo zoLwazi lwezoBugcisa ukuphumelela abafundi kuba nzima kakhulu.
Ukufunda iZakhono zoBuchule: Ukwenza izibikezelo, ukuqonda isigama kwisimo esisebenzisa izikhokelo zenkcazelo, ukufumana ingcamango ephambili, ukulandelelanisa, ukuchonga iingxaki. Kwakhona kubandakanya izakhono zokupelisa njengento yesenzi kunye namazwi atyunjwe kunye nezakhono zesakhiwo sokwakha izilwanyana, iziqhamo zamagama kunye nama-homophones.
Ixabiso: Ngexesha lokushicilela, ibhuku leencwadi liye laphuma kwi $ 10.59 - i-$ 15.74 kwi-Amazon.
Ukungaqondiswanga kweNkcazo yokuBhaliswa kweeBakala 3-4
Umshicileli: Houghton Mifflin Harcourt
Isishwankathelo: Le ncwadi ibandakanya amaphepha eenkcukacha ekuqaleni kweyunithi nganye kunye nesifundo ngasinye sinika imiyalelo ecacileyo yokufundisa izakhono. Iimagalelo zokufunda zilandelwa imibuzo yokuqonda kwifomathi yokukhetha kunye neempendulo ezimfutshane, ngoko ke abantwana banokuziva bazilungiselele iimvavanyo eziqhelekileyo. Le ncwadi ibandakanya abaququzeleli bezobugcisa kunye needati zokudibanisa.
Ukufunda iZakhono zoBuchule: Ukufumanisa ingcamango ephambili, ukusebenzisa izikhokelo zenkcazelo , ukulandelelana, ukuchonga isizathu kunye nesiphumo, ukwenza inkcazo, ukufumana iinkcukacha, nokuqonda umahluko phakathi kweqiniso kunye neembono.
Ixabiso: Ngexesha lokunyusa, ibhuku leencwadi liye laphuma kwi-$ 9.97 - $ 15.74 kwi-Amazon.
Kutheni Uthenga? Izingane zivame ukuhlaziywa ngeengcamango, kodwa ukungabonakali kubaluleke kakhulu ukufunda nokuqonda kwakhona. Ndiza kugqitha ukuba ininzi yomhla omdala ichithe ukufunda ukungafihli. Le ncwadi ibancedisa abantwana ukuba bangazifumani izihloko ezichaphazelekayo. Kaninzi "
Ukufunda ngokuBala imihla ngemihla, iBanga lesi-3
Umbhali: Camille Liscinsky
Isishwankathelo: Kukho iindatshana zokufunda eziphindaphindiweyo ezingama-150 kunye neetoni zeemfuno zokulandelela izakhono. Ulungele ukuhlolwa kokuhlola nokuhlaziywa kwemihla ngemihla njengoko isebenzisa iindinyana zokufunda nokungafihliyo kunye nemibuzo yokulandelelana ejolise kwizakhono ezibalulekileyo zokuqonda.
Ukufunda iZakhono zoMsebenzi: Ukufumanisa ingcamango ephambili , ukufumana izigqibo, ukulandelelana, ukuchonga isizathu kunye nesiphumo, ukuphuhlisa isigama, ukuhlalutya abalinganiswa, ukuthelekisa nokuchasana, ukwenza iingqinamba, ukulandelelanisa, ukuqikelela, ukuhlenga nokuhlalutya, nokufunda iinkcukacha, ukwenza ukudibana kunye ukulungiselela.
Ixabiso: Ngexesha lokushicilela, ibhuku leencwadi livela kwi-$ 17.27 - $ 19.71 kwi-Amazon.
Kutheni Uthenga? Amaphepha alungele ukuya kwiklasi okanye kusetyenziswa ekhaya. Ngokuqinisekileyo kufuneka uvula le ncwadi uze uqale. Ngaphezu koko, izifundo zilula ukulandela kwaye zichanekile ngokwaneleyo ukuba awudingi nantoni na enye into.
UkuFunda kweBakala 3
Umbhali: Abasebenzi be-Kumon
Umshicileli: Kumon Publishing North America, Incorporated
Isishwankathelo: Enye enye incwadi yokufundisa ootitshala bebanga le-3 bakala. Isisombululo esifanelekileyo sasehlobo kubafundi abanzima abaguqukayo ukusuka kwibakala lesibili ukuya kwibanga lesithathu.
Ukufunda Isakhono seZakhono: IsiGama sokwakha, i-Prefixes & Suffixes, Qhathanisa noKucatshangelwa, Ukucacisa amagama ngokuSondlo, Ngubani / nini / apho / apho / Kutheni / Kutheni / njani, Isatifiketi seSigcawu, ukulinganisa, nokwenza nokuhlaziya izibikezelo
Ixabiso: Ngexesha lokunyusa, ibhuku leencwadi liye laphuma kwi-$ 3.95 - $ 7.95 kwi-Amazon.
Kutheni Uthenga? Ukuba imali iyinkxalabo kuwe, ke le mithombo ilungile kwimali. Awuyi kufumana enye incwadi yokusebenzela enomgangatho ophantsi woluhlobo oluphezulu lomxholo.
I-Top 10 yeCarole King Iingoma njenge-Songwriter kunye noMculi
I-Circular-Flow Model yoQoqosho
Ukwakha iSicwangciso soSifundo: Inyathelo # 6 - Ukuzimela ngokuzimeleyo
Ubume be-Government of United States kunye nezoPolitiko